Usoro na Ọnọdụ - Họrọ Your daashi
Usoro na Ọnọdụ – Họrọ Your daashi
Nke a bonus ga-abụ n'etiti 26 January-1st February 2017 GMT.GMT buotu ihe bu ACST -9.30hrs, A -1hr, PTZ + 8hrsDeposit a nke kacha nta nke £ 10 ma na-a 50% deposit bonus egwuregwu ruo £ 100 MA Ọ BỤ nkwụnye ego n'elu £ 200 ma na- 10% ruo £ 25 na ego.
Nke a bonus na-emetụta gị ngụkọta ego na n'elu nkwado oge.
Ego ma ọ bụ ego ga-aka 3 -arụ ọrụ ụbọchị site na njedebe nke nkwalite ka-otoro gị account.Standard wagering chọrọ nke 30x daashi ego itinye tupu bonus ma ọ bụ ihe ọ bụla kwekọrọ ekwekọ winnings nwere ike napụrụ.
Naanị wagers mere on Real Money egwuregwu ga-eme kwupụta wagering chọrọ.
Wagers mere on Play N'ihi Free egwuregwu agaghị gụọ kwupụta wagering chọrọ.
Player na-eti na naanị otu bonus nwere ike nọ n'ọrụ n'otu mgbe, biko gaa na “akaụntụ M” ngalaba na-ele gị dum bonus kwụ n'ahịrị.
Managment mee ikike ịkagbu, chupu ma ọ bụ ịgbanwe ihe ọ bụla mpi ma ọ bụ nkwalite (ma ọ bụ ndị na-achịkwa ya) n'oge ọ bụla na-enweghị tupu ngosi.
General Usoro na ọnọdụ ide. Management mkpebi bụ ihe ikpeazụ N'ọnọdụ nile.
Usoro na Ọnọdụ – 50% Daily egwuregwu ruo £ 500